Waancaa Addunyaa Raashiyaa 2018: wal-dhabdee FIFA Sooreyyii Biraazilii fi Argantiinaa sarartuu bakka kalaqanii - BBC News Afaan Oromoo
Waancaa Addunyaa Raashiyaa 2018: wal-dhabdee FIFA Sooreyyii Biraazilii fi Argantiinaa sarartuu bakka kalaqanii
Goodayyaa suuraa kireemii areeda haaddachuuf fayyadaman fakkaata
Waan akka kireemii areeda haaddachuuf itti fayyadamuuti. Qabee wayii murteessaan taphaa saqqii isaa keessaa baasee wayita taphni kubbaa dhaabatte irraa itti fufu fageenya gareen kaan kubbaa irraa qabaachuu malu adda baasuuf gargaara. Guddina kubbaa miilaa yeroo dhiyoo keessatti taatee fayida qabeessadha.
Haata'u malee qaamni kubbaa miilaa aduunyaa bulchu FIFA fi kalaqxoota waanta biifamtu kanaa kan ta'an lammii Biraazil Hii'eenee Alamagnen gidduu abbaa qabeenyummaa kalaqaa fi kaffaltii irratti walii galteen hin jiru.
''Kuna lola Daawitii fi Gooliyaad '' jechuun Alamagnen BBC tti dubbateera. ''Isaan( warri FIFA) baayyee guddaa dha. Kana jechuun garuu isaan seeraa fi dhugaan oli jechuu miti.''
FIFA'n gama isaan ''adeemsi seeraa waan hin xumuramneef ammatti yaada hin kenninu'' jedhaniiru.
Aerosol dhaabbanni jedhamu biyyoota addunya 44 keessatti akka hojjetu abbootii kalaqaa Alamagnen fi Paabloo Silvaa abbaa kalaqaa fi gaazexessaa lammii Argantiinaa irraa maqaa '9.15 Fair play limit' jedhuun hayyama argateera.
Waltajjiiwwan dorgommii kubbaa miilaa hedduu irratti kan qoratame sarartuun kun, waancaa Addunyaa Braazil kan waggaa afran har'aa irratti qabeen 300 Riyoo Dejenerootti oomishame hojiirra oole fudhatamumma isaa dabaleera. Ergasiis dorgommiiwwan proofeeshinaala gurguddoo hunda irratti hojiirra ooleera.
Goodayyaa suuraa Abbaa kalaqaa Sarartuu Alamagne
Alamagneniifi Silvaan dhaabbata erga bara 2001 malaammaltummaan maqaan isaa ka'u FIFA, jalqaba akka qaama waliin hojjetuutti, achiis akka michuutti boodas akka wal himatutti waliin dubbachaa jiru.
Ji'a tokko dura waajjirri haqaa Biraaziil kalaqxoonni mirga ol iyyannoo akka qaban beeksiseera.
FIFA'n hanga ammatti sarartuun kun waancaa addunyaa Raashiyaa Waxabajjii 14 eegalu irratti hojiirra oolaaf hin ooluu hin ibsine.
''Murteen dhumaa waancaa addunyaa(Raashiyaa 2018) irratti beekama, qaanii addunyaa ta'a'' jedha Alamagnen.
Alamagnen dubbii kana araaraan xumuruuf doolaara Ameerikaa miiliyoona 35 gaafateera. Dubbiin kun gara seeratti waan ce'eefi Aerosol jaarsummaatti waan galeef maallaqni dubbicha araaraan goolabuuf barbaachisu doolaara Ameerikaa 100 ta'u akka malu kalaqxoonni ni tilmaamu.
Opireetara maashina qonnaa kan ture Alamagneen , yaaliin waldhabdee FIFA waliin qaban araaraan xumuruu waan hin milkoofneef Amantaa nyaachuu, amantaa dhabuu daldalaa fi abbaa qabeenyummaa kalaqaa akka hin malletti fayyadamuu kan jedhaniin FIFA himataniiru.
Ijji jaallattoota kubbaa miilaa ji'a dhufu dhaddacha dhimma kanaarra ta'a. Hooggantootni FIFA muraasnis dhaddacha Braazil kana irratti ni argamu jedhameera.
Waancaa Addunyaa FIFA 2018
Boombii dhuka'een namni tokko du'ee, 165 miidhaman
'Yaadni hammeenyaa keessan isiiniif hin milkoofne'
Haleellaa boombii mudateefi deeggarsi fayyaa taasifame maal fakaata?
''Bakka amma geenye bara 2020tti geenya abdii jedhun qaba ture''
Dr. Mararaa Guddinaa Yunivarsiitii Finfinneetti deebi'uufi
Ministirri Mummichaa Dr Abiy hiriira deegarsaa irratti hirmaachuf
'Jila Eertiraatiif simannaa ni taasifna' Obbo Mallas Alam
Okkara Kaameruun dayaasporaatu miidiyaa hawaasummaan uume jedhame
Hariiroo Itiyoo-Ertiraa biyyoonni guddatan attamiin ilaalu?